Nagaa ganna tokkoon duuba Itoophiyaa fi Eertiraan maal buufatan? - BBC News Afaan Oromoo
Nagaa ganna tokkoon duuba Itoophiyaa fi Eertiraan maal buufatan?
Adoolessa 8 bara 2018 waggaa har'aa MM Abiy Ahimad gara Asmaraa imaluun waliigaltee seena qabeessa waraana biyyoota lamaanii gidduu turetti xumura godhe pireezidant Isaayyaas Afawarqii waliin mallatteessan.
Waliigaltee kana boodas daangaan biyyoota lamaan wal qunnamsiisu baname, maatiin gamaaf gamanatti gargar bahee ture walitti deebi'e.
Miirri gammachuu yeroos ture nagaa fi badhaadhina waliinii biyyoota lamaaniifis abdii guddaa uumee ture.
Haa ta'u malee daangaan biyyoota lamaan wal qunnamsiisu kallattii afuriin banamee ture hundi walduraa duubaan cufame, hariiroon daldalaa sababa banamuu daangaan eegalamee tures adda citeera.
Waraanniifi qoqqoobbiin erga irraa dhaabbatee Eertiraan maalirra jirti?
Daangaa Itiyoo-Eertiraatti daldalli cimeera
Mootummaa Eertiraa irraas ta'e kan Itoophiyaa irraa sababni daangaan kun cufameef ibsi ifa ta'e hin kennamne.
Lammiin Eertiraa dhimma kana hordofaa turan Dr Yohaannis Waldamaariyaam, daangaan cufamuun isaa pireezidant Isaayyaas nageenya dhuunfaa isaaniif jedhanii waan godhan natti fakkaata jedhu.
"Namoonni akka fedhan daangaa yoo qaxxaamuran, akka fedhetti to'achuuf isa rakkisa, kun sababa ta'uu danda'a" jedhu.
"Ija lammilee Eertiraan wayita ilaallu wanti murteessaan daangaan banamuufi cufamuu osoo hin taane, daangaan sararamuu isaati" jedhu hayyuun kun.
Goodayyaa suuraa Dangaan erga banamee booda namoonni bilisaan socho'aa turan, daldallis ho'ee ture
Haa ta'u malee daangaan biyyootilamaan waggoota 18'f irratti wal dhabaa tran hin sararamne.
Kuni ta'uu kan danda'eef akka isaan jedhanitti pireezidant Isaayyaas dhimmichaaf xiyyeeffannaa kennuu waan dhiisaniifi MM Abiy ammoo daangaa Tigiraay irratti ajajuuf aboo waan hin qabneefi.
Qondaalonni naannoo Tigiraay mootummaa Eertiraa waliin wal hin fedhan. Lafti biyyootni lamaan irratti wal dhabaa turan ammoo harka naannichaa waan jiraniifi, MM Abiy waan kennuu hin dandeenye kennuuf waadaa galani jedhu Dr Yohaannis.
Lammilee Eertiraaf maaltu jijjiirame?
Waggaa tokko dura wayita nagaan biyyoota lamaan gidduutti bu'u sadarkaa addunyaatti oduu guddaa ture, abdiin tures guddaadha.
Maatiin gargar hafee ture walitti deebi'uun alatti wayita daangaan banaa ture walitti daldala turerraa faayidaan argame jira.
Haa ta'u malee nagaan kun lammilee Eertiraaf bu'aa tokkoyyuu hin buusne jedhu Dr Yohannis.
"Mootummaan Eertiraa inumaa abbaa irrummaa isaa itti dabalee. Dhiyeenya kana monoksoota bataskaana Kaatolikii yaala fayyaa lammileef kennan hidhaa jira."
Pireezidant Isaayyasiifi MM Abiy garuu waliigaltee kanarraa fayyadamaniiru jedhu.
Isaayyaas "hawaasa idil-addunyaa irraa kophaatti baafamuun ni hafeef, qoqqobbiinis irraa ka'eera. Abiy ammoo "beekkamtii guddaa itti argate" jedhu.
Lammilee biyyoota lamaaniif garuu qabatamaan bu'aan nagaan kun argamsiise hin jiru jedhu.
'Haaromsaaf ariitiin hin barbaachisu' - Isaayyaas Afawarqi
Waliigaltee nagaa kana booda jijjiiramni dirree diimokiraasii babal'isuu Itoophiyaa keessa jiru Eertiraa keessattis ni mul'ata abdiin jedhu guddaa ture jedhu lammileen Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraatan.
Itoophiyaan gama siyaasaatiin biyyoota ollaa jiran caalaa gara fooyya'insaatti deemaa jirti jedha lammiin Eertiraa waggoota 22 darbaniif maatiisaa waliin Finfinnee keessa jiraataa jiru Jamaal Nasraddiin.
"Haalonni tokko tokko amaluma jijjiirama haaraa irraa rakkoon yeroo mudatu ni mul'ata. Ta'us amma Itoophiyaan daandiin ijaarsa sirna dimokiraasii fooyya'aatti ceesisu sana qabatteerti jedheen yaada" jedha.
Goodayyaa suuraa Abbaa ijoollee isaa waggoota dheeraaf gargar bahanii turan waliin wal arge
Lammiin Eertiraa biroo Mohammed Kiyaar, ammoo haala mootummaa fi uummatoota Eertiraa fi Itoophiyaa keessa jiru walbira qabuun ibsu.
"Itoophiyaa keessa sirnaa fi seeratu jira. Eertiraa keessa garuu seerri akka Itoophiyaa kanatti hin jiru."
"Uummanni Itoophiyaa maaliif carraa kanatti fayadamaa akka hin jirre naaf hin galu. Mootummaa gaarii qabu. Biyya heera mootummaatiin bultu qabu."
"Eertiraa osoo fudhattee carraan hammanaa hin jiru. Dhaabbileen uummataa Eertiraa keessatti hojii basaasaa fi aangoo pirezedaantichaa tiksuu qofa hojjetu. Itoophiyaa keessatti garuu dhaabbileen akkanaa kan uummata tajaajilan tahaa jiru." Eertiraa keessa wanti heera mootummaa jedhamu hin jiru kan jedhan Obbo Mohaammad, namni yaada addaa qaba jedhame dhumnisaa mana hidhaati jedhu.
Walitti dhufeenya Eertiraa fi Itoophiyaa waggaa tokkooffaa
Eertiraafi Sudaan daangaa cufamee ture banuuf waliigalan